PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-07 - OweThe Soil usizwa yidlozi elimkhanyiselayo
OweThe Soil usizwa yidlozi elimkhanyiselayo
ILUNGU leqembu lomculo we-acappela, iThe Soil elicula phambili uNtsika Ngxanga, lithi lisizwa yidlozi likamkhulu walo ongasekho emhlabeni okuyilona elimnika izingoma ezihlabahlosile ajabulisa ngazo abalandeli baleli qembu. UNtsika ubexoxa neSolezwe ngeSonto emcimbini wokuqoshwa kweDVD yembongi eyaziwa ngoFana noJobe (Khumbulani Sithole) obuseBat Centre eThekwini ngoLwesihlanu ebusuku. Uthe noma ecula esiteji uke ezwe ukuthi akasahambi yedwa sekukhona amandla edlozi ahambisana nawo. Uthe umculo usewuthatha njengento ewubizo kuyena.
“Umkhulu wami owashona wayecula, sengiyabona ukuthi uyena ongilethela izingoma emaphusheni ami, ngithi uma ngizibhala ngizicula abantu bezijabulele. Le nto yokucula nezinkondlo ixhumene kakhulu nabaphansi. Noma ngisesiteji umoya othize othatha indawo ngibe kwelinye izinga,” kusho uNtsika.
Uthe uyalibonga leli khehla ngoba izinto zakhe ziyakhanya njengoba esesungule nenkampani entsha iNomadic Tribe Music lapho kuphekwa khona umculo wakhe.
Le nsizwa enethalente lokucula nokuhaya izinkondlo kuphoqeleke ukuthi ibuye kaningi esiteji kulo mcimbi ihambisana nembongi obekuqoshwa iDVD yayo. Izethameli bezisukuma zime ngezinyawo uma sebeshaya ingoma abayenze ngokuhlanganyela ethi Shalom. Ephawula ngokusebenzisana kwakhe noFana noJobe uthe, kade wabona ukuthi bangasebenzisana ngoba unekhono, wacela ukusebenza naye. Uthe mningi umsebenzi abasazowenza ndawonye.
Enye imbongi ehlanyise izithameli ebhule amazolo nguGubhela obehaya inkondlo yothando echaze abesifazane okuyibona abebezwakala besho ngengila.
UFana noJobe ujabulise okwengane ibona amaswidi ethola ithuba lokucula nelungu leThe Soil, uthe lokhu kuwukufezeka kwephupho lakhe.
“Kukhomba ukuthi ithalente lami liyakhula lifinyelela emazingeni aphezulu. Ngijabule ngendlela engingeke ngichaze. Ngibonga abantu abaphume ngobungi ukuzongibona ngihaya, nginethemba lokuthi umsebenzi wami uyabelapha